Ihe dị mkpa, nnukwu ọrụ ga-enye ọtụtụ ihe ị ga-ekwu. | Gam akporosis
Ihe dị mkpa, nnukwu ọrụ ga-enye ọtụtụ ihe ị ga-ekwu.
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Gam akporo nsụgharị
Ọ bụrụ na ịnụbeghị banyere Mkpa, ị ga-adịghị anya. Ebumnuche dị mkpa iji gbanwee ihe anyị maara ugbu a banyere ụwa nke smartphones. Ihe oru ngo na-adighi mfe a priori, ma o nwere ike ibia n'ihi Andy Rubin. Onye ọ bụla bu ụzọ kee ihe gam akporo bu n’azụ oru a.
1 Andy Rubin nzo na mobile ozo
2 Ihe dị mkpa abụghị naanị akara ama ama ọhụụ.
Andy Rubin nzo na mobile ozo
Ihe dị mkpa na-ada ụda n’olu na-ada ụda. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ọ bụ ụlọ ọrụ mejupụtara ndị dị mkpa n'ụwa nke teknụzụ. Na ebumnuche siri ike, ịbụ ezigbo ihe ọzọ na ụlọ ọrụ ndị na-achị ahịa taa. Ọ bụghị naanị na ebumnuche ị ga-ebili ndị na-eme ekwentị.
O yiri ka ụlọ ọrụ a n'ọdịnihu agaghị edozi maka naanị atụmatụ nke smartphones dị elu. Dị ka ọtụtụ ndị bịara CES 2017 si kwuo, Andy Rubin gosipụtara ngosipụta nke njedebe n'ọdịnihu n'ọtụtụ nzukọ na ndị nwere ike itinye ego na ya. Ndị nwere obi ụtọ ịhụ ya na-ekwu okwu ahụ ekwentị nwere ihe eji emepụta ihe na nke izizi.
Enwere ihe ijuanya àgwà ọ ga-egosi ekwentị ọhụrụ a, emebeghị baptizim. M ga- Ihuenyo 5,5-inch, mana nke ahụ anaghị eme nnukwu ngwaọrụ ebe ọ bụ na ọ "na - afanyekwa" ihu n'ihu na nke kachasị. A na-ewere njedebe nke njedebe dị ka njedebe dị elu ma nwee a pụrụ nnọọ iche njikọ. Site na njikọ a ị nwere ike ijikọ modulu dị iche iche n'ụdị nke esemokwu Moto Z, nke ga-agbakwunye arụmọrụ ndị ọzọ.
Echiche dị mkpa abụghị naanị iru ụwa smartphone. Ha choro ka ha buru ndi iro nke ndi uku. NA ebumnuche bụ ịsọ mpi na Apple iPhone, ma ọ bụ jiri Google Pixels ọhụrụ. Nke a ọ ga - ekwe omume na ụlọ ọrụ na - adịghị adị na gọọmentị? Lọ nzọ ahụ dị ize ndụ, mana nwere otu ndị mejupụtara ndị ọrụ Appe, Google na Samsung. Ya mere ndị maara ihe na-esi nri na ngalaba elu nke ụlọ ọrụ teknụzụ kachasị ukwuu n'ụwa.
Ihe dị mkpa abụghị naanị akara ama ama ọhụụ.
Mana ọ bụrụ na onwere ihe na - eme mkpọtụ karịa, ọ bụ ebum n’uche ịga n’ihu. Wouldn't gaghị edozi maka ịmepụta nnukwu ama. Ọ bụghị naanị na ha na-ama onwe ha aka iru n'elu ahịa smartphone iji bụrụ ihe siri ike na nke kachasị. Na Essential usoro ihe eji arụ ọrụ eji arụ ọrụ, a ga-amụkwa.
Dị ka anyị si mara, Apple ma ọ bụ Google sistemụ nrụọrụ taa nwere ihe ruru otu narị pasent nke ngwaọrụ. Ọnụnọ na ahịa nke sistemụ arụmọrụ ọhụrụ na-eweta obi abụọ. O yikarịrị ka enweghị ọdịiche dị na mbara igwe nke teknụzụ mkpanaka maka sistemụ arụmọrụ ọhụrụ. Ewepu Windows a na-apụghị ịgbagha agbagha ma ewezuga onwe ya na ngwaọrụ nke aka ya, enweghị sistemụ arụmọrụ nwere ohere.
Kedụ ka ọha na eze ga-esi nweta sistemụ arụmọrụ ọhụrụ? Site na mbido, ịgbanye na sistemụ arụmọrụ amaghi ekwenye. A ga-enwerịrị ọtụtụ mmelite ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ na-enye iji dọta ndị nwere mmasị. Mana ọ bụrụ na anyị eburu n’uche na onye ọrụ ahụ bụ onye guzobere usoro kachasị eji eme ihe n’ụwa, ihe gbanwere.
Andy Rubin, onye ekwere na imepụta gam akporo mbụ na onye nwere ọrụ maka ọtụtụ mmepe ya, nwere nnukwu atụmatụ maka Mkpa. Ọ ga-abụ ihe dị ịrịba ama n’akụkọ ihe mere eme nke teknụzụ iji nwee ike ịmepụta sistemụ arụmọrụ nke abụọ n’ahịa. Rubin, nzọ nnukwu na ihe zuru ezu. Smartphone na sistemụ arụmọrụ na-aga aka na ọrụ a na-atụ ụzọ.
Na nkenke, na-ahụ na ndi otu nwere oke okacha amara ndị maara usoro na ụdị nke ga-aga nke ọma. Na-eche na nke ahụ Andy Rubin nọ n'azụ ọrụ ahụ Anyị nwere ike na-atụ anya na-arụpụta ihe dị ukwuu. Dị ka asịrị, anyị ga-echere ihe karịrị ọkara afọ iji chọpụta ihe Mkpa ga-eweta n'ahịa. Dị ka ọ dị na mbụ, anyị ga-agwa gị akụkọ niile na-ebilite. Anyị enwere ike ijide ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Ihe dị mkpa, nnukwu ọrụ ga-enye ọtụtụ ihe ị ga-ekwu.
Nwere ike ịchọpụta nọmba ekwentị dị nso?
LG gam akporo Wear smartwatch a na-amaghị ama gafere na FCC